IINDIDI ZEEBIDETS (ISIKHOKELO SOYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iindidi zeeBidets (Isikhokelo soYilo lwegumbi lokuhlambela)
Iindidi zeeBidets (Isikhokelo soYilo lwegumbi lokuhlambela)
Wamkelekile kwisikhokelo sokuyila kwigumbi lokuhlambela esigubungela ezona ntlobo zidumileyo zeebidets kubandakanya ezizimeleyo, isihlalo sangasese, ngaphezulu komdonga, iimodeli eziphathwayo neziphathwayo.
Yaziwa kakhulu eJapan, ii-bidets lulongezo olukhulu kuyo nayiphi na indlu yangasese. Banokwenza amava acoceke ngakumbi, asebenze ngokukuko, kwaye ngokubanzi bongeze umnxeba wangoku kwindlu yakho yokuhlambela.
Ngelixa ii-bidets zihlala zicingelwa njengezihlalo zangasese ezinokusebenza okongeziweyo, zininzi iintlobo ezahlukeneyo zebidet kwintengiso ukuze zilungele iimfuno zakho kunye neemfuno zakho. Qhubeka ufunda ukuze ufumane yonke into oyifunayo malunga nokongeza i-bidet kwigumbi lakho lokuhlambela.
Iibhidithi zesihlalo sangasese
Ngaphezulu kwee-Rim Bidets
Ixabisa malini iBidet
Isebenza njani iBidet?
Iibhidi ezizimeleyo yile nto kanye zivakala ngathi. Endaweni yokuba ezi biditi zilungele isitya sakho sangasese, ziziqwenga ezahlukileyo kwigumbi lakho lokuhlambela. Ezi azenzelwanga ukuba zithathe indawo yangasese endaweni yoko ziyilelwe ukusetyenziswa emva kokuba usebenzise indlu yangasese - sisixhobo esahlukileyo ngokupheleleyo.
Ngelixa ukhetho lwemveli ngakumbi kwiindawo zoMzantsi Merika, ezi ntlobo zeebidets azithandeki eUnited States. Nangona kunjalo, basabambe ukufaneleka kwabo njengomtsalane kunye nokusebenza.
Ezi ziya kuza ngexabiso eliphezulu kuwe kuba zisisixhobo esongezelelekileyo kwigumbi lakho lokuhlambela. Baphinde bathathe igumbi elingaphezulu kune-bidet yangasese yangasese, umzekelo, ngoko ke baphunyezwe kakuhle kwiindawo zokuhlambela ezinkulu ezibonisa indawo eninzi eyongezelelweyo. Ukuba ubeka enye kwigumbi lokuhlambela elincinci, unokufumanisa ukuba awunandawo kwaphela okanye ugcwele uyilo. Ngethamsanqa, zininzi ezinye iintlobo zeebidets ezinokuhlangabezana neemfuno zangasese ezincinci.
Olunye lweentlobo zebhidethi ezaziwa kakhulu eMelika ziibhiti zokuhlala zangasese, ngamanye amaxesha zibizwa nje ngokuba sisihlalo seetetet.
Ezi bidets zinika umsebenzi odibeneyo we-bidet kunye nesihlalo sangasese. Xa uthenga enye, iya kuthatha indawo yesihlalo sakho sangasese sangoku. Iijethi ezitshiza amanzi zibekwe ngaphantsi nangaphakathi kwesihlalo sangasese kwaye ungazilawula ngepaneli ebambelela ecaleni.
Ukulawulwa ngqo kolu hlobo lwebidet kuya kwahluka. Ezinye izinto zibeka useto lwejethi ezininzi okanye zongeze ukusebenza okunje ngesihlalo esishushu. Khumbula, nangona kunjalo, okona kunikezelwa yi-bidet, kuya kubiza kakhulu.
Ngelixa kubiza kakhulu kunezinto ezinje ngebhidi ebanjwa ngesandla, iibhidi zezihlalo zangasese ziyafikeleleka ngakumbi kuneemodeli zebetet ezimeleyo. Ukongeza, bathatha indawo encinci kakhulu, ebenza ukuba babe lukhetho olukhulu ukuba unendawo yokuhlambela encinci.
I-bidet engaphezulu kwe-rim luhlobo lwe-bidet eyodwa. Nangona kunjalo, bohluke kancinci kunombono osisiseko we-bidet yodwa kuba abadubuli jets zamanzi phezulu ngakuwe ngendlela enxulunyaniswa neebidets ezimileyo kunye nezihlalo zangasese zebidet.
Endaweni yokuba i-bid-over-the-rim igcwaliswe ngamanzi kungqameko. Abahlali begcwele, nangona kunjalo. Endaweni yoko ukhetha ukugcwalisa njengoko kufuneka ngokuvula itompu ephezulu kwi-bidet, kufutshane nendlela isitya sokuhlambela imisebenzi.
Ezi zincinci zithandwa kakhulu ekusebenziseni okuqhelekileyo kuba zincinci. Uhlala kuzo kwaye usebenzise izandla zakho ukwenza uninzi lomsebenzi abanye abantu abawufumana kancinane kunococeko. Ukuba le ayiyindebe yakho yeti, ungakhathazeki. Zininzi ezinye iintlobo zebetet phaya. Ukuba kuvakala ngathi kungafanelana neemfuno zakho, bakhetha kakhulu ukuba unegumbi elaneleyo kwigumbi lakho lokuhlambela kwimodeli ezimeleyo.
Ii-bidets eziphathwayo ziphethe imvelaphi yazo kuMbindi Mpuma kwaye, ngenxa yoku, zihlala zaziwa ngokuba yiShattaf. Esi sisitshizi esinye onokuhamba ngokuzimela apho usidinga khona kwaye utsale umatshini wokutshiza amanzi. Cinga ngendlela esebenza ngayo ithumbu lokutshiza kwisitya sakho sasekhitshini- yingqondo efanayo xa iyonke ngeenjongo ezahlukeneyo ekugqibeleni.
Olu lukhetho olufikelelekayo olungabizi mali ingako ukufaka. Ngaphezulu koko, awunakukhathazeka malunga nokuthatha indawo eninzi nokuba. Kuba zilungiswe nje ngesandla, awunyanzelekanga ukuba unikezele yonke indawo kwigumbi lakho lokuhlambela kukhetho oluzimeleyo okanye ubeke indawo enkulu ekuhombiseni njengokuthenga isitulo sangasese esitsha.
Ezi zikhulu kakhulu kuba zihlala zixhuma kunikezelo lwamanzi endlwini yakho-ngakumbi amanzi ashushu. Amanzi afudumeleyo aya kuhamba indlela ende ekwenzeni amava akho abe lula ngakumbi.
Iibhidikethi eziphathwayo zikulungele ukuhamba. Isenokuvakala ingaqhelekanga okanye ingathandeki ukuphatha i-bidet xa useluhambeni kodwa ukuba ukhetha i-bidet ngaphezulu kwephepha lendlu yangasese, kukho indlela yokuzisa i-bidet kunye nawe naphi na apho uya khona. Iibhidikethi eziphathwayo, ezikwabizwa ngokuba ziibhidi zokuhamba, zenzelwe le njongo kanye!
Zombini zikhona zombane kunye neebhatidi eziphathwayo ezinokusetyenziswa ezikhoyo kodwa ukhetho olungelulo lombane luya kuza ngexabiso eliphantsi. Kuba abaxhumani kumbhobho wombindi osembindini - umzekelo, imibhobho yamanzi kwigumbi lakho lokuhlambela - akufuneki nokuba ifakwe. Oku konga ixesha kwaye ukuba uqesha ingcali ukuba ifake i-bidet, inokuqhubeka nokukugcina kwiindleko ngokunjalo.
Xa ukhetha i-bidet yohambo, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba ukhetha imodeli elungileyo. Ufuna into ekulula ukuyigcina, okuthetha ukuba akukho-spill top kunye nebhegi yokuhamba zizinto ezintle ekufuneka uzijongile.
IiBidets zinokuza nezixhobo ezahlukeneyo kunye neempawu. Ezinye zezi ziyimfuneko, ezinje ngezixhobo zokukunceda udibanise i-bidet ukuya kwinkqubo yakho yombhobho, ngelixa ezinye zinokuzikhethela kwaye zinokongeza kwixabiso le-bidet.
Eminye imizekelo yezi zinto zibandakanya ukhetho olufana nokufafaza, useto lobushushu, kunye nezinye izinto. Ingabandakanya ukusebenza okongeziweyo okungachazwanga kwi-bidet efana nendawo yokuhlala yangasese esebenza njengesihlalo sokufudumeza indlu yangasese.
Akukho lixabiso linye kuzo zonke ii-bidets ngezizathu ezimbalwa. Kwelinye, iintlobo ezahlukeneyo kunye neentlobo zinamaxabiso ahlukeneyo.
Olunye uluvo oluya kuchaphazela ukuba ibidet yakho ixabisa kangakanani ixhomekeke kwiimpawu onazo. I-bidet esebenza ngokukodwa njenge-bidet enobushushu obunye iya kubiza ixabiso elincinci. Kwelinye icala, izinto ezongezelelweyo ezinje ngesihlalo sokufudumeza, useto lobushushu oluninzi, kunye nezinye izongezo ziya konyusa iindleko zebidet yakho.
Uluhlu lweebidets lubanzi kwaye unokufumana isisombululo esivela kwi- $ 30 ukuya kuthi ga kwi-600 yeedola. Oku kuthetha ukuba lukhetho olunokufikeleleka kodwa ukuba unemali eyongezelelweyo yokutyala imali ekuthengeni kwakho, ungatyabula amanqaku ongezelelweyo ukonyusa ukusebenza kongezo olutsha kwigumbi lakho lokuhlambela.
Ukuba awuqhelananga neebidets, inokuba yoyikisa okokuqala xa uzama ukusebenzisa enye. Ungakhathazeki, nangona kunjalo, kuba zilungile ngokuthe ngqo!
Umxholo ngokubanzi we-bidet kukuba ufeza amanzi ukukunceda ukuba ucoce. Nangona kunjalo, ii-bidets ezahlukeneyo zinokuza noseto olwahlukileyo, ke kuhlala kuyinto elungileyo ukuziqhelanisa nemodeli ethile ngaphambi kokuyisebenzisa. Incwadana yakho yomsebenzisi ingaluncedo olukhulu apha.
Umsebenzi ophambili we-bidet ngumbhobho wokutshiza, uhlala ulawulwa nge-lever okanye iseti yamaqhosha. Ezinye iibidets ziya kukuvumela ukuba ulawule ubushushu bokutshiza ngokunjalo.
Ngokubanzi, konke okufuneka ukwenze kukuhlala apho sele uhleli khona, okanye, kwezinye iimodeli, beka i-bidet apho ufuna khona. Emva koko, yenza nje ukutshiza. Ngamanye amaxesha, kunokuba luncedo ukosula ngaphambi kokutshiza ibhidet ukususa onke amasuntswana aqinileyo ashiyekileyo acoceke kangangoko.
Abanye abasebenzisi bakhetha ukomisa ngetawuli emva kokusebenzisa i-bidet nangona izicwili zangasese zihlala zisebenza. Sibhale ngakumbi malunga ukubekwa komnini wephepha langasese apha ngaphezulu ngalo mbandela.
Sebenzisa i-bidet ine-plethora yezibonelelo. Ezi zizizathu nje ezimbalwa zokuba ufanele ukuthathela ingqalelo ukuba ne-bidet ekhayeni lakho.
Enye yazo, zilukhetho olusempilweni kakhulu kuba azinazandla. Konke okufuneka ukwenze kukucofa iqhosha kwaye umsebenzi wenziwe. Akukho mfuneko yokongeza igalelo evela kuwe!
Kule nqaku, ii-bidets zikwangcono kakhulu kokusingqongileyo. Iphepha langasese lenza inkunkuma eninzi, ngakumbi eMelika. Ngokufaka i-bidet, unokonyusa ukuba luhlaza njani ikhaya lakho.
Iibhidiyithi lukhetho olufanelekileyo kubantu abanokuhamba okulinganiselweyo ngokunjalo. Oku kuthetha ukuba ukuba wena okanye umntu ohlala naye unokwenzakala, iintlungu ezingapheliyo, okanye umdala, i-bidet inokuhamba indlela ende ekuqinisekiseni ukhuseleko kunye nokuzimela.
Eyona nto ilunge kakhulu, ii-bidets zihlala zithambile kulusu lwakho kwaye zikulungele ukuzisebenzisa. Kananjalo, bakhetha kakuhle ukwenza igumbi lakho lokuhlambela limeme ngakumbi.
Ngolwazi esilugubungele apha, uyazi yonke into ekufuneka uyazi malunga neentlobo ezahlukeneyo zebidets. Ukulungele ukuphuma uye kufumana i-bidet ehambelana nokuhonjiswa kwakho, iimfuno kunye nezinto ozikhethayo. Ukuba ungathanda ukubona indlela i-bidet eya kujongeka ngayo ekhayeni lakho kukho inani Iinkqubo zesoftware yokulungisa igumbi lokuhlambela oko kunokukunceda ukongeza enye kwisicwangciso sakho somgangatho.
Iphepha leethishu leTissue yePhepha leMetal yangoku… $ 10.99$ 13.99 ngexabiso umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-859 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Moen DN8408CH Ingqokelela yePreston… $ 10.79$ 18.10 umthengisi ogqibelele (2540) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
BEMIS 70 000 Isihlalo sangasese, ROUND, Plastic,… $ 20.11 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-3136 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
BioBidet BB-600 BB600 Ultimate Advanced ... $ 399,00 umthengisi ogqibelele (4014) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Brondell Bidet - Thinline SimpleSpa SS-150… $ 29.99$ 34.99 umthengisi ogqibelele (10680) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ukufudumala kwesihlalo sangasese seToastie Tush (Round) $ 64.00 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-352 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iisiseko zeAmazon AB-BR809-SN zale mihla… $ 15.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-4189 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
ISmartterFresh Faucet Bidet Sprayer sokuSebenza ... $ 31.95 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1553 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Edding enkosi ikhadishttp: //www.google.com/
uphi sithandwa sam